Astaanta Dibiga “The Bull” - Land Of Punt
Astaanta Dibiga “The Bull” meelo farabadan baa ku arkay oo kamid yihiin daaraha tayadoodu sarayso, waxaad ugu imanay oo dibugu ka hor taagan yahay dhismayaasha suuqa meelaha ugu dadka badan ee laysugu yimaado. Waxaad ku arkay shirkadaha magaca roon oo sitoos ah amse sided ban usita astaan dibiga. Taarikhda dabataal dibiga way qotodheer tahay waxay ku arooray ilaa qarnigii Kaynaantiinta “Canaan 1200BC” wakhtigaa oo dibida la caabudi jiray oo laga aaminsanaa inuu barako samaawiyi lasocoto.
Wakhtigii Fircooniyiinta, Babalooniyanka, Roomankii ilaa dhulka soomaligu dego ee looyaqaanay dhulkii uduga “The land of Punt” dibiga warkiisu wuu yaalay. Dibiga ugu caansan uguna cawaandisan ee tarikhdisa la hayo waa “Moloch” waxaana laga xusijiray dhulka iminka loo yaqaan bariga dhexe. Moloch wuxuu caan ku ahaa inuu jecelyahay dhiiga caruurta yaryar, qoomka la dhacsanaa afkarta Moloch ayaa caruur u sadqaynjiray si’uu raali uga noqdo. Qoomka caabudijiray dibiga waxaa kamid ahaa yahuudi hore; waatan uu As-saamiri odhanayo waxaan idinhaya oo aynu Ilaaha Muuse ku badalanaynaa ilaaheeni hore ee aynu caabudijirnay isagoo markaa ulajeeda dibiga. Waa kii intuu dahab kasoo uruuriyey reer bani isreal godka kasoo saaray dibi hadlaya intuu ciid barakaysan ku shubaya godka.
Diimaha saxda ah oo dhan way soo qaatan dibiga la caabudo tariikhdiisa waxaanad ku arkay Yahuuda, Kiristanka iyo Quraanka Kariimka. Diinta Islaamka lo’da/ dibiga inuu yahay naflay lagu halaagay qoom lunsan way inoo sheegtay.
Waxaynu ka warhaynaa in shirkado waa weyn oo dunida laga yaqaan isticmaalan calaamado xambaarsan tariikh aan laguwada socon oo xataa markaad eegto nuxurka kujira iyo ujeedada laga leeyahay toos uga hor imanayaan diimaha samaawiga ah siiba ta Islaamka. Aqoonyahanka u dhuun daloola siraha kujira astaamaha dunida laga isticmaalo waxay isku raaceen inay yihiin oo ay ka turjumayaan afkaar koox gaari wadato. Waxaa lagunaanaday in xertan astaamaha isticmaasha macluumad aan lawada aminsanayn kusoo ladhaan calaamadaha oo ay khalad tahay. Waxay ku muujiyaan calaamdaha awooda ay leeyihiin hadii ay tahay dhaqaale iyo mid siyaasiya.
Hadaba su’aashu waxay tahay maxaa kalifay astaamo quruumo hore ama sixiroole lahaa shirkado caan dunida ka ah oo u adeega bulsho kaladuwan in astaan looga dhigo, waxaad dareemay in meesha ujeedokale kujirto oo gar iyo gardaro ay arinkooda socodsiinayaan. Waxaynu isweydiinaynaa faraqa udhaxeeya qoomka hore ee lagu halaagay asnaan caabud shaydaan ku duufsaday oo u qurxiyey waxaan jirin iyo qoomka manta jooga ee isla ilaahi Moloch iyo asnaabta lamidka ah sawirka looga soo dhigay inta magacakale losoo bixiyey faraqa waxay ku kala duwan yihiin. Sanabkii “UZZA” ee Makka yaalay Nabi Maxamed cs ushiisa kuriday hadii aan soo qaato uu guriga dhigto, iyo hadii aan “UZZA” taswiirtisa fadhiga sudho iyo hadaan magaciisa “UZZA” shaadhka ku qorto maxay ku kala duwanyihiin. Waa iskumid kii uun oo dhinacaad udhigtaa waa isla meshi uun. Waxaa inoo raaca astaamaha lagu ladho sixir saamayn ku leh bulshada oo xaqiiqo ah.
“Dunida laga aaminsanyahay cilmi baaldilka (midka lafalgala Shaydan caabud) waxaa laga aaminsanyahay in calaamadaha ama sumadaha laga isticmaalo aduunka (kuwo khaasa ah) in aay iiska kaashadan sixiroole/sixiroolayasha iyo Shayadiinta ay la shaqaysataan kana faa’idaystaan cilmiga ugaar ka ah”. Magic, It’s ritual, Power & Purpose, W E Butler
astaanta dibiga Iluminaatiga Ilumunati lo maysooniyada sac The bull ururada hadafka qarsoon leh